Hojjettoonni mootummaa Godina Qeellamiitii 'lubbuuf sodaatanii' Finfinneetti baqatan rakkoo himatan - BBC News Afaan Oromoo
Hojjettoonni mootummaa Godina Qeellamiitii 'lubbuuf sodaatanii' Finfinneetti baqatan rakkoo himatan
Godina Qeellam Wallaggaatti hojjettoonni mootummaa lubbuu keenyaaf sodaannee Finfinneetti baqannus Finfinneetti rakkataa jirra jechuun BBC'tti himan.
Nageenya isaaniif yaadda'uudhaan maqaa isaanii ibsuu kan hin barbaannee fi hojjetaa waajjira bulchiinsa magaalaa Dambidoolloo akka turan kan himan tokko, yeroo godinicha turretti hojii mootummaa fi dhaaba kanaa hojjechaa turrus amma nama nudhagahu dhabneerra jedhan.
"Waanuma mootummaa kana tajaajilluuf qofa maqaan keenya Feesbuukii irratti poosti godhamee tarkaanfii irratti haa fudhatamu jedhamee labsame. Kanaaf achi jiraachuu waan yaaddofneef maatii keenya qabannee gara Finfinneetti baqanne" jedhan
Maqaa keenya adda baasuudhaan tarreessanii 'namoonni kunneen hojii akkasii hojjechaa jiru, bakka argamanitti tarkaanfiin irratti haa fudhatamu' jedhee kan akka tarkaanfiin nurratti fudhatamu godhu qaama hidhatee naannicha keessa socho'u ta'uus himu.
Obbo Lammaa Magarsaa: ''Qaamni maqaa WBOn socha'aa jiru saffisaan dhaabuu qaba''
Sababa kanaan hojii qaban dhiisanii Finfinneetti akka baqatan himan.
"Muuxannoo godinichatti turerraa yoo ilaallu namoonni maqaan isaanii maxxanfamee 'tarkaanfiin irratti haa fudhatamu' jedhaman hedduun isaanii ajjeefamaniiru.
''Nutis erga maqaan keenya maxxanfamee ajjeefamuun keenya waan hin oolle akka ta'e waan beeknuuf achii baqanne," jedhu namni kun.
Yeroo ammaa Magaalaa Finfinnee fi naannawaasheetti waajjiraalee jiranitti iyyannee hojii barbaannus argachuu hin dandeenye kan jedhan hojjetaan mootummaa kun, maatii isaanii waliin rakkachaa jiraachuu himu.
"Erga gara Finfinnee dhufnee amma ji'a shan guutaa jirra. Waajjiraaleema mootummaa Naannoo Oromiyaa irra asiifi achi deemaa oolla. 'Gama dhaqaa gamana dhaqaa' malee furmaata kan nuuf kennu hin arganne," Jedhan.
Bakka irraa baqatan godina Qeellam Wallaggaatti deebinee hojii keenya itti fufuu guutummaan guutuutti akka hin dandeenyes himu.
"Maatiin keenya kan achi jiraannu eessarraan achii baanaa jedhanii nudhiphisaa jiru. Achitti deebinee hojjechuun waan hin yaadamnedha," Jedhan.
Godinuma kana Aanaa Sayyoo irraa lubbuu isaa olfachuuf hojii mootummaa dhiisee Finfinneetti baqachuu kan himu namni kan biraa tokkos, tarkaanfiin qabeenya kiyyarratti fudhatamnaan hojiikoo dhiisee achii bahe jedha.
"Qaama hin beekamnetu manakoorratti dhakaa darbachaa bulu, dallaakoo diigu. Boodarra lubbuukoo baafachuufan ji'a kudhan dura gara Finfinnee dhufe," jedhan.
Miidhaa irra gahee fi aggaammii lubbuu isaarratti godhame qaamni nageenyaa godinichaa hubatee xalayaa deeggarsaa barreessufis naannootti garuu nama abbaa kanaa naan jedhun dhabe jedhan.
"Godinichatti rakkoo nageenyaa jiru, lubbuu hiriyoota keenyaa achitti ajjeefamanii argineeti kan achii baqannee baane.
Namoonni kunis hojuma mootummaa kanaatiif osoo hojjetanii kan ajjeefaman. Mootummaan naannoo kuni garuu deeggarsi nuuf godhu laafaadha. Warra naannoo keenyarraa dhufemmoo maqaa 'shaneetiin' fudhachuufuu fedhii hin qaban" jedha.
Namoota hanga 15 tahanii guyyumaan seektaroota naannootti deddeebi'anii gaafachaa jiraachuu fi namoota miidhaa cimaa akka abiddaan gubachuu irra gahee fi xalayaa deeggarsaa qabatanii dhufaniifillee falli kennamaa hin jiru jechuun komatu.
"Amma bakka qubannullee dhabaa jirra. Ijoollee keenyaaf waan daabboo ittiin binnullee fixanneera. Baay'een keenya maatii qabna. Ijoollee keenya barumsa adda kuchisiisnee qabannee dhufne. Isaanis barumsa dhabanii nutis rakkoo hammaataa keessa jirra," jedhan.
Yeroo adda addaatti qondaaltota mootummaa dabalatee namoota hedduu irratti ajjeechaan raawwateera. Kanaaf, mootummaan qaama hidhatee bosona keessa socho'u himata.
Waraanni duratti ajaja ABO jala tureefi ji'a saddeet dura eegale irraa citeera jedhe garuu himannaa mootummaa hin fudhatu.
Ta'us, fuulawwan Fesbuukii waraana bosona hafetti hidhata qaba jedhamanii shakkaman irratti yeroo yerootti tarkaanfiin akka fudhatame yeroo barraa'u ni mul'ata.
Dhimma kanarratti kan gaafanne hogganaan biiroo Pablik Sarvisii fi Qabeenya Namaa Oromiyaa Dr. Biqilaa Hurrisaa, qajeelfamni haaraan namoota akkanaa gargaaruuf A.L.I Adoolessa 15, bara 2011 bahuu himan.
'Jijjiirraa haala addaatiin taasifamu' jedhamee kan bahe kanaan hojjetaan rakkoo nageenyaa hamaan isa mudate bakka biraatti jijjiiramuuf xalayaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa sadarkaan jiranirraa xalayaa dhiheefachuu gaafata jedhan.
Hojjettoota godinaalee rakkoo nageenyaa qabanirraa gadhiisanii dhufan keessummeessuuf garuu amma seektaroonni naannoo hedduun rakkoo bajataatin sakaalamuu himu.
Namoota hedduu bakka rakkoon nageenyaa jirurraa hojii gadhiisanii dhufan akka hojii argatan deeggarreerra kan jedhan Dr. Biqilaan, hojjettoonni sodaadhaan hojii gadhiisan garuu lakkoofsi isaanii dabaleera jedhu.
"Boru rakkoon anarras nigaha jedhanii sodaadhaan namoonni hojii gadhiisan hedduudha. Namoota akkanaammoo caasaan nageenyaa bakka waan qabatamaa miidhaan irra gahe hin jiraannetti xalayaa deeggarsaa hin kennuuf. Kanarraa kan ka'e namoota akkanaa nus keessummeessuuf nirakkanna," jedhan.
Gaaffiin jijjiirraa fi hojjetaan rakkoo nageenyaatiin hojii gadhiisuu daran dabaluus himan. Fedhiin kunis gara giddugaleessaatti siquu barbaadurraa kan maddu akka ta'es eeran.
Naannoon namoota rakkoo keessa galan kanneen hamma danda'een akka gargaaruu fi tajaajila kennamurratti godinaan garaagarteen jedhame garuu akka hin jirre himan.